Sunday,2Dec, 2018 8:51 AM
झण्डै एक वर्षदेखि सांगठानिक काम ठप्प हुँदा कार्यकर्ता बरालिएर हिँडेका छन्, त्यसमाथि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको एउटा निर्णयबारे नेतापिच्छे फरक–फरक बुझाई भइदिँदा अर्को अन्योल थपिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको जारी सचिवालय बैठकले विशेष कमिटी बनाएको हल्ला भयो– सात प्रदेशबाहेक एउटा नयाँ गैरभौगोलिक प्रदेश बनाएर कतिपय पार्टी कमिटी र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने मान्यताअनुरूप त्यस्तो गर्ने भनिएको हो तर त्यही कुरामा अहिले आएर ‘हो’ र ‘होइन’ को अन्योल थपिएको छ । पार्टी खुला अवस्थामा छ । संघर्षकालीन समयमा विभिन्न पेशा र व्यवसायका मान्छेले परिचय ढाँटेर अण्डरकभरमा काम गर्थे । अहिले त्यस्तो जटिलता छैन । त्यसो भनेर विधानबाट पेशागत जिल्ला कमिटी हटाइयो ।
तर, ‘यी सुकिलामुकिला भड्किन्छन्’ भनेर त्यो बुँदा फेरि मिलाइएको छ । तत्कालिन एमालेले उपत्यकाभित्र मजदुर, विद्यार्थी र पेशागत गरी तीन जिल्ला कमिटी बनाएको थियो । अहिले एकीकृत पार्टीले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, म्यानपावर थपेर नयाँ जिल्ला कमिटीको अवधारणा ल्याएको छ । पहिला उपत्यका समन्वय कमिटीबाट ती जिल्ला कमिटी हेरिन्थ्यो । अहिले विशेष प्रदेश बनाएर सोझै केन्द्रले हेर्ने भनिएको छ । त्यो गैरभौगोलिक प्रदेशले जिफन्ट (मजदुर) र पेशागत जिल्ला कमिटी मात्रै हेर्ने कतिपयको बुझाई छ । जिफन्टभित्र यातायात, कारखाना, छापाखाना मजदुरदेखि पेन्टर, कार्पेन्टर, व्युटिसियनसहित दर्जनजति क्षेत्रका मानिस समेटिएका छन् भने पेशागत जिल्ला कमिटीभित्र निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक (निजी र आंगिक), स्वास्थ्यकर्मी (सरकारी र निजी), लेखापरीक्षण, सहकारी, उद्योग व्यवसाय, सञ्चार, सेवा क्षेत्र (संस्थान, एनजिओ) सहित २१ किसिमका पेशाकर्मी संगठित छन् ।
वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र र माधव नेपालको बुझाईमा त्यस्तो प्रदेश बनेको होइन भन्ने छ, अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरचाहिँ बनेकै हो भन्नेमा छन् । यी पेशाकर्मीलाई चुनाव, सार्वजनिक सभाहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीको भूगोल कमिटीसँग जोडिन्थ्यो । एमालेभित्र भौगोलिक र गैरभौगोलिक जिम्मेवारीबीच फरक किसिमको व्यवहार र भूमिका रहँदै आएको थियो । गैरभौगोलिक कमिटीका मान्छेहरू आफूहरूलाई भूगोलको वडा र टोल कमिटीको जत्तिको पनि व्यवहार भएन भन्ने गुनासो गर्थे भने भूगोलमा काम गर्नेहरू पेशागतमा बसेकाहरूलाई हाकिम मानेर पार्टीले उनीहरूको कुरामात्र सुन्छ भन्थे । त्यस्तो पेशागत कमिटीअन्तर्गत तत्कालिन एमालेमा ७ हजार र माओवादीमा ३५ सय सदस्य संगठित थिए । त्रिशुलीमा जिप खसेर बेपत्ता भएका माधव घिमिरेले मुख्यसचिव हुनुअघि तत्कालिन एमालेको पेशागत जिल्ला कमिटीबाट सदस्यताको फर्म लगेका थिए, ‘म एमाले नै हुँ’ भनेर ।
उता, १० घटक मिलेर बनेको तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अर्को भद्रगोल छ । नयाँ शक्ति, माक्र्सवादी, फोरम, जनसमाजवादी, वैद्य निकट, विप्लवका तिलक परियारसहितका नेता–कार्यकर्ता उक्त पार्टीमा समाहित भएका थिए । तर, अहिलेका नियुक्तिहरूमा तिनीहरूले मौका पाएनन् भन्ने गुनासो छ । ‘रैथाने माओवादी’ ले मात्रै अवसर पाउने प्राथमिकतामा परेको भनेर गुनासो पोख्न जानेलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पन्छिने गरी जवाफ दिएका छन् । जवाफ थियो, ‘जे सोचिएको थियो, त्यस्तो भएन । यसो भन्दैमा मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन । तर, नियुक्तिहरूमा सल्लाह छैन । आफ्नै ढंगले चल्ने चलन रहेछ । उहाँ (केपी) ले जे भन्यो, त्यही हुने रहेछ ।’ उदाहरण दिन्छन्, ‘हेर्नुस् न, प्रदेश इञ्चार्जको हकमा । ७ मा १ हामी, ६ उताका छन् ।’ भेट्न जानेहरूले ‘ओलीसँग बार्गेनिङ पावर कमजोर भयो कि’ भनेर ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । यसरी आफ्नो गुनासो लिएर जानेहरूले उल्टै प्रचण्डको गुनासो सुन्नुपरेपछि चित्त नबुझाएर गरून् के ?
उता, नाट्य संगीत प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रचण्डले संगीतकार शम्भुजित बासकोटाको सिफारिस गरेका छन् भने ओलीले अर्का संगीतकार गणेश रसिक भनेका छन् । यी दुबैको पृष्ठभूमि गैरदलीय छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनकै साँस्कृतिक मोर्चाबाट उठेका रामेश, रायन, मञ्जुल, रामकृष्ण दुवाल, जेबी टुहुरे, आभाष, अरिम, रामशरण नेपाली, जीवन शर्माहरूले कहिले मौका पाउने, के भूमिका पाउने ? भन्दै प्रचण्डलाई भेट्न जानेहरूले ¥याख¥याख्ती पार्ने गरेका छन् । एकजना पूर्वमाओवादी त प्रचण्डसँग कड्किएकै थिए, ‘ओलीले गंगा उप्रेतीलाई तीन–तीनचोटि एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाउन हुने ?’